को ब्रेक लगान सिस्टम को डिजाइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको को एक ब्रेक caliper खेल्छ। यो संयन्त्र प्राय कार द्वारा यात्रा को सुरक्षा मा निर्भर गर्दछ। सङ्कुचन समयमा ब्रेक डिस्क ब्रेक को caliper गर्न प्याड परिणाम लोड पहुंचाता र पछि उहाँले विवरण यसलाई पठाउँछ वाहन को चेसिस।
Structurally, को ब्रेक caliper दुई परस्पर भागहरु को रूप मा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। एक जो - को बोल्ट संग पिन संलग्न एक स्थिर कोष्ठ। र दोस्रो - यो कोष्ठ गर्न बोल्ट र मरम्मत किरा प्रयोग संलग्न चल्ने ब्रेक caliper। प्याड गर्न को पेडल जारी गर्दा सजिलै decompress सक्छ मा, चल्ने समर्थन तेर्सो सार्न सक्षम छ।
को caliper ब्रेक एक सिलिन्डर, को ब्रेक जूता छ compresses जब ब्रेक पेडल र वाहन को हाइड्रोलिक सिस्टम संग जोडिएको समर्थन। सबै भार सीधा प्रसारित छैन त, तर समर्थन कोष्ठ र विवरण बाँकी मार्फत "चलिरहेको"। धेरै नै प्रक्रिया गर्मी मा गतिज ऊर्जा रूपान्तरण को रूप मा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। कि घर्षण पैड र डिस्क र सडक सतह मा पाङ्ग्रा को घर्षण कारण हो।
ड्रम ब्रेक समर्थन गर्न analogous छलफल गर्न सकिन्छ, तर आधुनिक वाहन मा, यस प्रकारको दुर्लभ छ। एक unpopularity ब्रेक ड्रम यो अक्सर अर्डर बाहिर, साथै समर्थन भन्दा कम प्रभावकारी छ भन्ने तथ्यलाई देखि पाउनु भएको छ। त्यसैले आज पनि गैर-संचालित पाङ्ग्रेमा मात्र ब्रेक caliper लागू हुन्छ।
यो संरचना व्यापक पछिल्लो दशक मा मोटर वाहन उद्योग मा प्रयोग भएका छन्। र योग्य यो सिस्टम को स्वाभाविक अकाट्य लाभ: डिजाइन, उच्च ब्रेक लगान दक्षता, मर्मतसम्भार सजिलो, र स्थायित्व को सादगी। अर्को फाइदा सानो caliper डिजाइन वजन छ, र यो कारणले धातु को सानो मात्रा निर्माण मा प्रयोग गर्न हासिल छ।
ब्रेकिंग समर्थन, वास्तवमा, केवल एक drawback छ: यो आफ्नो खुलापन, कि हुन्छ वर्षाको मौसममा छ को ब्रेक डिस्क जो ब्रेक लगान दक्षता कम, पानी प्राप्त हुन सक्छ। तर ठीक यसको "खुलापन" को कारण, यो संयन्त्र, यो बरु एक प्लस छ गरम करना छैन।
Caliper ब्रेक शायद असफल। आफ्नो सेवा मात्र हुन्छन् ब्रेक पैड प्रतिस्थापन र मरम्मत किरा चिल्लो को caliper। विस्थापन गर्न आवश्यक जब दुर्लभ अवस्थामा मरम्मत किरा ब्रेक सिलेंडर। कारण यसको डिजाइन को सादगी गर्न, मर्मत गर्दा, ब्रेक caliper ठूलो वित्तीय लागत आवश्यकता छैन।
कार, ट्रक, एसयूवी, साथै निर्माण मशीनरी: मिति गर्न, ब्रेक caliper लगभग सबै आधुनिक वाहन मा प्रयोग गरिन्छ। आखिर, यो विश्वसनीयता, छ निकै यसको सञ्चालन सरल जो एक सरल डिजाइन, संग संयुक्त। सायद, पनि एक भन्दा बढी दशक लागि, मानवता एक योग्य प्रतिस्थापन ब्रेक caliper आविष्कार छैन।
"वोल्गा" (मिसिन): इतिहास, मोडेल विनिर्देशों
सेन्ट पीटर्सबर्ग सबैभन्दा gynecological क्लिनिक: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
को अलंकार अन्तर्गत crate कसरी सेट गर्न?
उल्लू चल्ला (फोटो)। कसरी घर मा अप owlet ल्याउन
को "Sims 3" कसरी अद्यावधिक गर्ने? कसरी नयाँ संस्करण गर्न "Sims 3" अद्यावधिक गर्ने?
भिजेको FACADES: यो के हो? भिजेको मोहरा को प्राविधिक विनिर्देशों, यसको फाइदा र बेफाइदा
Filmography डायना Agron। डायना र श्रृंखला मा उनको भूमिका "चोयर"
शिफन स्पन्जले केक नुस्खा: रसीला केक लागि आधार
सर्गेई Zhadan: को जीवनी र रचनात्मकता